**ဟုတ်လို့လားလို့မေးလာတဲ့...အဆိုတော်*ဆိုတေး*နဲ့အင်တာဗျူး** - ♪♪ဖူးစာရှင်လေး♪♪
တရက်ကို ပိုစ်(2)ခုထပ် ပိုမတင်ရန် နှင် photo တင်တဲ့အခါ မိမိတို့ပုံမဟုတ်သောပုံများ ၊ သဘ၀ Wallpaper ပုံများကိုလည်း ၃ ခုထပ်ပိုမတင်ရန် လေးစားစွာမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ♪♫
မူလအိမ်သင့်အိမ်အကြုံပြုစာရေးရန်သူငယ်ချင်းများဖိတ်ခေါ်၇န်ဓါတ်ပုံများဗွီဒီယိုဆွေးနွေးချက်ကဗျာအုပ်စုများဘလော့များစာပေ ကဏ္ဍတာ၇ာမင်းဝေစာပေများMp3Flash songsဘောလုံးပွဲRadioBlogspotfacebookဆိုဒ်မှတ်တမ်းChat
All Blog PostsMy Blogထည့်မယ်
Posted by ♪♥♪ဆုဂျေ♪♥♪ on နိုဝင်ဘာလ 18, 2011 at 9:00pm
***Alter စတိုင်လ်လေးတွေကြိုက်တယ်ညီမ...Free Style လေးတွေပေါ့နော်.။
အမျိုးအစား: **အင်တာဗျူး** like 82 members favorited this
You need to beamember of ♪♪ဖူးစာရှင်လေး♪♪ to add comments!
Comment by Myat Min Thu ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တုန်းက ကိုဆိုတေးရဲ့သီချင်းတွေကိုကြိူက်တယ်ဗျာ အဝေးရောက်ချစ်သူ သီချင်းလိုပဲ တိုက်ဆိုင်တယ်ဗျာ Comment by စိုးအောင်ကျော် on ဇန်န၀ါရီလ 4, 2013 at 5:01pm အဝေးေ၇ာက်ချစ်သူကို ထာဝရနားနာထောင်နေတယ်နော် တိုက်ဆိုင်လိုပါ
Comment by မြင့်မြတ်ဇော် on ဇန်န၀ါရီလ 3, 2013 at 8:11pm ကိုဆိုတေးရဲသီချင်းတွေအားလုံးကိုကြိုက်ပါတယ်..ကိုဆိုတေး၇ဲသိချင်းတွေထဲးမှာ(အဝေးေ၇ာက်ချစ်သူကို)အကြိုက်ဆုံးပါနော်.......... Comment by ဖြိုးအိ on ဒီဇင်ဘာလ 25, 2012 at 8:45pm ထိုင်းမှမိုးရေထဲမှဆိုပေးသွားပေးတယ်နော်
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ကောင်းမလေး Comment by zaychit on နိုဝင်ဘာလ 10, 2012 at 7:29pm သီချင်းအကုန်လုံးကိုကြိုက်ပါတယ်။ Comment by youngboy on အောက်တိုဘာလ 13, 2012 at 1:55pm အင်း ကောင်းပါတယ် သီချင်းလေးတွေက အေးလို့ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်
အဲအခွေထဲက သီချင်းအကုန်လုံးကိုကြိုက်ပါတယ် Comment by kaykay on စက်တင်ဘာလ 12, 2012 at 12:21pm ယူကမဟုတ်တဲ့ကားထွက်တယ်ဆို ဒါကြောင့် ဒို့ မော်လမြိုင်က ပ၇ိတ်သတ်တွေကယူ့ကို မကြိုက်ကြတော့ဘူး မဟုတ်ဖူးဆို၇င် ၇ှင်းလင်းပွဲလေးလုပ်စေချင်ပါတယ် ယူပြောချင်တာ၇ှီ၇င် ဒို့အကောင့်ကိုအပ်လိုက်နော် gtalkqueen.999@gmail.com Comment by ကောင်းမြတ် on သြဂုတ်လ 31, 2012 at 2:13pm အကိုဆိုတေးကျွှန်တော့အကောင့်လေးကိုလက်ခံပေးပါkaungwer Comment by ဆူးကာရံ ချစ်သောGTalkလေး on သြဂုတ်လ 21, 2012 at 10:12am အကိုဆိုတေးရဲ့အကောင့်လေးကိုဆူးအကောင်းကိုလက်ခ့နော်ladygagaggirl.1999
Comment by suwaihtun on ဇူလိုင်လ 27, 2012 at 3:00pm ကြိုက်ပါတရ်နောက်လဲများများတင်ပေးပါ ‹ Previous
အချစ်များနဲ့လူ သို့မဟုတ် မာယာရှင်ကောင်မလေး
၁ စာပို့နည်း နဲ့ စာဖတ်နည်း
၂ နှစ်ယောက်တည်း Chat နည်း
၃ ကွန်မန့်များဝင်မလာအောင် ရပ်တန့်နည်း
၄ Flash Songs ရှာဖွေနည်း
၅ မိမိ pageမှာflashနာရီထည့်နည်း
၁၁ ဆိုဒ်မှ မေးလ်များရပ်တန့်နည်း
၁၂ ဓါတ်ပုံတင်နည်း(error ဖြစ်ရင်)
၁၄ မိမိအ်ိမ်ကသီချင်း Auto play လုပ်နည်း
၁၇ Password မေ့နေသူများအတွက်
၁၈ မိမိ ရဲ့ နာမည် ကိုပြန်ပြောင်းနည်း
၁၉ ပုံလေးနဲ့ ကွန်မန့်ပေးနည်း
၂၀ မိမိ Profile ပုံကို Effect နဲ့ပြင်နည်း
၂၁ ဓါတ်ပုံ နှင့် ပို့(စ်)များပြန်ဖျက်နည်း
၂၂ YouTubeမှVideo တွေကိုတင်နည်း
၂၅ သင်ကိုယ်တိုင် မျှဝေနည်း
၁။ Gtalkကို နှစ်ကောင့်အထက်ဖွင့်ချင်သူများအတွက်
၂။ Gtalk custom message အလန်းတွေ
၄။ Creating Group in Gmail
5 မိမိပို့ လိုက်တဲ့ Email ကို လက်ခံတဲ့သူကဖတ်မဖတ်သိချင်ရင်
6 G-talk မှာဘာသာပြန်လေးတွေထည့်ချင်သူများအတွက်
8 Pink colour G-talk
9 အခိုးခံရသော သင်ရဲ့Gmailကို ပြန်လည်ရယူခြင်း
10 G Talk မှာပုံတွေအလိုလိုပြောင်းစေတဲ့ Gtalk Shell
11 ကိုယ့် Gmail ကို သူများဝင်သုံးနေသလားစစ်ကြမယ်ဗျာ
12 Ning Websiteများမှ check out နှင့် လှုပ်ရှားမှု့အသိပေး email များကို folder ခွဲထားနည်း
၁၃ Chatting သင်္ကေတများ
14 မိမိနားထောင်နေသော သီချင်း Gtalk staus တွင် ပေါ်အောင်လုပ်နည်း
15 Mail ထဲကမဟုတ်ပဲ Gtalk Off Line Login လုပ်ကြရအောင်
၁၆ Gmail sign in မှာမိမိ နာမည်မကျန်ခဲ့အောင်
၁၇ Gtalk ထဲမှာ Gmail မသုံးပဲ ပုန်းရအောင် ...
၁၈ Google Plus အားစတင်လေ့လာကြည့်ခြင်း ( ၁ )
၁၉ Google Plus အားစတင်လေ့လာခြင်း ( ၂ )
၂၁ အဖွဲ့ဝင်များအား Connection ကျနေစဉ် G talk, G mail ဖွင့်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ကာပို့ခြင်းဖြစ်သည်
၂၂ Gmail နှင့်တူသော Blumail
၂၃ G mail တွင် attachment နဲ့မဟုတ်ဘဲ ပုံပို့ နည်း
၂၄ Email အကောင့်မရှိဘဲ Email ပို့နည်း
၂၅ ဂျီမေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေ & ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ
၂၆ G-talk password ကိုခိုးနိုင်တဲ့ အကြောင်းလေး
၂၇ Google+ Preview
28 Google translater ဖြင့် ၅၈ ဘာသာ ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်
29 ကိုယ်ပိုင် *group* လေးလုပ်ပြီး chat ကြမယ်နော် ...........
30 Gtalk သုံးရတာ connection ကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေအတွက်
31 G-talk မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖုန်းများသို့ မက်ဆေ့ပို့ရန်
32 ကဲ G-Talk Poxyနဲံ့ကျော်ဖွင့်နည်း
33 Gmail.အတုအယောင် ၀က်ဘ်စာမျက်နှာတွေ သတိထားသင့်
34 G-Mail Account Lock ကျသွားလျှင်ဖြေ၇ှင်းနည်း
35 မိမိပို့ လိုက်တဲ့ Email ကို လက်ခံတဲ့သူကဖတ်မဖတ်
36 Google Home page တွင် မိမိစိတ်ကြိုက်နောက်ခံပုံများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီ…
37 G talk အကောင်.လုပ်နည်း
38 Gmail auto reply လေးလုပ်ကြရအောင်
39 G-mail Account သစ်တွင် Account ဟောင်းမှလူများပြန်ထည့်ချင်လျှင်
40 Gtalk အစိမ်းလေးနော်
1 မြန်မာဖောင့် (android)
3 Special Electro Ringtones
4 Android application ရေးသားဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်
5 Android ဖုန်းမှာ Flash သီချင်းနားဆင်ရန်
6 Android ဖုန်မှာRoot လုပ်စရာ မလိုပဲ မြန်မာဖောင်.သွင်းကြ၇အောင်
7 Android ဖုန်းကို 3D ဒီဇီုင်းလေးနဲ့သုံးရအောင် (SPB Shell 3D v1.5.3-lucky.apk)
8 Android Myanmar Fonts 2
9 ကရင်ပြည်နယ် ကိုယ်စားပြု Future Myanmar Theme
1။မိမိပုံကို Puzzle Board Style ပြင်မယ် ...
၂ photoshopနဲ့မီးတောက်စာလုံးတဇိုင်းလုပ်မယ်( Fire Text )
၃ photoshop နဲ့ background နောက်ခံဓါတ်ပုံပြောင်းမယ်
၄ (shape collage)ဓါတ်ပုံတစ်ရာလောက်ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ
၅ photoshop နောက်ခံ နဲ့ စာလုံးဒီဇိုင်း လုပ်ကြည့်ရအောင်
၆photoshop နောက်ခံ နဲ့ စာလုံးဒီဇိုင်း လုပ်ကြည့်ရအောင်(2)
၉ Photoshop မှာTxet လေးကို Animation နဲ့သုံးကြည့်ရအောင်
၁၀ Photoshop လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဒီမှာ လေ့လာမယ်။
၁၁Photoshop မှာTxet လေးကို Animation နဲ့သုံးကြည့်ရအောင်
15Photoshop နဲ့ ခဲဖြစ်ပုံလေး ဖန်တီးမယ်
16 Photo FIlter Retouching Technique 3
17 ဒေါင်လိုက် အကြောင်းလေးတွေနဲ့ မိမိပုံကို စတိုင်ပြင်မယ် ... ( Vertical Panel Effect )
18 BUTTON လုပ်နည်း နံပါတ်တစ်
19 Photoshop မှတ်စာများ ၁ (မြန်မာဖိုရမ်)
20 အလွယ်ကူဆုံး ရွှေရောင်စာလုံးပြုလုပ်နည်း(Photoshop)
22•♥´¨`♥•.¸Photoshop နဲ့ပတ်သက်သော စာအုပ်များ ( မြန်မာလို ).•♥´¨`♥•.¸
23 CreateaPixel Effect using layer mask (လုပ်နည်း)
24 Light explosion text(လုပ်နည်း)
မြန်မာသမီးပျို (၁၆)နှစ် သမီးလေးကို မုဒိမ်းကျင့်သည့် မှုခင်း
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှ မိကျောင်းလူသား (အဆင်ပြေပါစေ)
နယူးယောက်မြို့က မိုးမစိုတဲ့ မိုးရွာခန်းတဲ့ ခင်ဗျာ (အဆင်ပြေပါစေ)
ပန်းအဘိဓာန်(FLORAL DICTIONARY) (အဆင်ပြေပါစေ)
ကန်ဒေါ်လာ လေးသန်းတန် Lamborghini
ဆံပင်မွှေးဖြင့်လျှပ်စစ်မီး အလင်းပေးသူ ဆယ်ကျော်သက် နီပေါနိုင်ငံသား (အဆင်ပြေပါစေ)
မည်းနေတဲ့ဒူးခေါင်း . တံတောင် ဆစ်ကြောင့် စိတ် မညစ်နဲ့တော့ (အဆင်ပြေပါစေ)
ဒူဘိုင်းမှ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ရဲကားများ (အဆင်ပြေပါစေ)
Today top Edit
မိမိ ချစ်သူရဲ့ G talk ထဲကိုဝင်လာတဲ့ Mail တွေမှန်သမျှကို ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ထဲ ကိုရော ထပ်တူ မရောက်စေချင်ဘူးလား ?
Top News · Everything သန္တာအေး leftacomment for ♫ツMr.Ѵαℓɛитιиɛツ♫2 minutes ago♥ Admin ♥သူသူ favorited ကိုမင်းမင်း's blog post မွတ်စလင်တွေ စားသောက်နေတဲ့ မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင် အများကြီးပါ4 minutes agoူlawka969@gmail.com, tuntun, ပြည့်စုံ and 17 more joined ♪♪ဖူးစာရှင်လေး♪♪4 minutes agoမိုးအောင် updated their profile4 minutes ago♥ Admin ♥သူသူ commented on ကိုမင်းမင်း's blog post မွတ်စလင်တွေ စားသောက်နေတဲ့ မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင် အများကြီးပါ4 minutes agoသဲမောင် leftacomment for eipyaemonkyaw7 minutes agoeipyaemonkyaw commented on ♫♪အလွမ်းဆွေးသမားလေးblueskyyeye♪♫'s videoသစ်ထူးလွင် Myanmar News Now- အင်တာနက်ပေါ်ပျံနှံတဲ့လာ အင်မတန်လူသာမဆန်တဲ့ နှိပ်စက်မှု (ရုပ်_သံ)7 minutes agomoe rain star leftacomment for မေဖူးသွယ်9 minutes agoမင်းလူ leftacomment for အိဖြိုး9 minutes agoမင်းလူ leftacomment for eipyaemonkyaw10 minutes agoကျော်မင်းထိုက် postedagroupသူငယ်ချင်းများဥယျာဉ်13 minutes ago 0
♫ツMr.Ѵαℓɛитιиɛツ♫ leftacomment for Alluring p@E18 minutes ago More... RSS
© 2013 Created by ♥ဖူးစာရှင်လေး♥. Badges | ပြဿနာတခုခုတင်ပြရန် | Terms of Service